Jirama : telo taona tsy foana ny delestazy | NewsMada
Jirama : telo taona tsy foana ny delestazy
Miakatra ny faktiora, mihena ny fanampian’ny fanjakana, mitohy ny delestazy. Ireo ny fanazavan’ny minisitry ny Angovo, Ramanantsoa Rodolphe, mikasika ny orinasam-panjakana Jirama. Nampiany koa ny fanazavana fa mitohy ny fiaraha-miasa amin’ny orinasa vahiny, Symbion Power, fa hovaina ny fifanarahana ary tsy nomena ny antsipiriany.
Anisan’ny fepetra napetraky ny mpamatsy vola iraisam-pirenena, ho takalon’ny famatsiam-bola toy ny an’ny FMI farany teo ny fampiakarana ny faktiora. Raha ny fanirian’izy ireo aza, tsy tokony hanampy ara-bola ny Jirama intsony ny fanjakana, saingy tsy azo tanterahina avy hatrany fa nahena ho 250 miliara Ar amin’ny taona 2017 raha 300 miliara Ar amin’ity taona ity.
Ny tena loza, sahy nanao fanamby ny filoham-pirenena fa raha lany izy, foana ao anatin’ny telo volana ny delestazy. Tsy fantatra ny nahasahiny nanao izany fanamby izany, saingy tsy vitany ny namaha ny olana efa ho telo taona latsaka izao ary tsy tanterany ny toky nomena.
Nilaza ny minisitry ny Angovo fa mahatonga ny delestazy ny fahanteran’ny milin’ny Jirama. Tsy vao izao nahafantarana izany, ary efa hatramin’izay, nialoha no nisian’ny fanjakana ara-dalàna ny milina antitra sy ny delestazy ary ny tsy fahampian’ny gazoala mampandeha ny gropy mpanome herinaratra. Tsy fahita aty amintsika ny fametraham-pialana na fanesorana tompon’andraikitra rehefa tsy mahavita ny asany na tsy nahatratra ny tanjona ary indrindra tsy nahatanteraka ny toky nomena. Zary filamatra tsy mampihontsina sady tsy ampidirina anaty RRI, ho toy ny laharam-pahamehana sy tsy mahakasika ny sosialim-bahoaka sy ny fihariana ny lafiny herinaratra.